ဘုံပြproblemsနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလျှင်သင်အလွယ်တကူရနိုင်သည် အုတ်ပြုပြင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို patios တစ်နှစ်ပတ်လုံးရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်မြေကြီးပေါ်တွင်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ကျုံ့ခြင်းတို့ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဘုံပြproblemနာတစ်ခုမှာနစ်မြုပ်နေသည်။ နောက်ထပ်ပြproblemနာတစ်ခုမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်လက်တွေ့ကျကျပျောက်ကွယ်သွားခြင်းသို့မဟုတ်အက်ကွဲခြင်းနှင့်ချစ်ပ်များကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းခံရသည့်ကြံ့ခိုင်သောမော်တာဖြစ်သည်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, သင့်ဟင်းလင်းပြင်အုတ်ပြုပြင်ရေးမှတဆင့်ပြုပြင်မွမ်းမံပေးခြင်းတစ်ခုခက်ခဲသောလုပ်ငန်းတာဝန်မဖြစ်သင့်ပါ။ အဆင့် ၁ – မော်တာတွင်မထားရှိသောနစ်မြုပ်နေသောအုတ်များအစားထိုးခြင်း နစ်မြုပ်နေသောအုတ်များကိုစို့ဖြင့်ဖယ်ရှားပါ။ နေရာကိုကျောက်စရစ်သို့မဟုတ်သဲများဖြည့ ်၍ အုတ်ပြားများအတွက်မျက်နှာပြင်ညီမျှစေရန်ဖိအားစတုရန်းပုံဖော်ပါ။ သဲအသစ်များကိုဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်လိုအပ်ပြီးအုတ်သစ်များသည်ကျန်ရှိသောဟင်းလင်းပြင်နှင့်လုံး ၀ ...
Stucco သည်ရိုးရာအပြင်ဘက်တွင်ဆောက်လုပ်ထားသောပစ္စည်းဖြစ်ပြီး၎င်း၏ကြာရှည်ခံမှု၊ သင်သည်ရှည်လျားသောတာရှည်ခံစေရန်သေချာအောင်လုပ်နိုင်သည်။ အဆင့် ၁ – ပြင်ဆင်ပါ ပထမ ဦး စွာသင်၏ stucco ကောင်းမွန်စွာပြုပြင်ထားကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဆေးသည် hairline အက်ကြောင်းများကိုဖြည့်ပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်ခရက်ဒစ်ကဒ်၏အကျယ်မှ ၁/၈ လက်မအထိအက်ကြောင်းများသည်ဖြုတ်နိုင်သော ...
10 သင်၏ကားဂိုဒေါင်ထဲမှအလုပ်နေရာပိုမိုရရှိရန်နည်းလမ်း ၁၀
အိမ်ပိုင်ရှင်များစွာအတွက်ကားဂိုဒေါင်သည်ကားများတပ်ရန်နေရာသာမကရုံမက oddball ပစ္စည်းများသိုလှောင်ရန်စဉ်းစားသည့်နေရာလည်းဖြစ်သည်။ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ ရာသီအလိုက်အလှဆင်ခြင်းများအပါအ ၀ င်အရာအမျိုးမျိုးအတွက်နေရာဖြစ်သည်။ ကားဂိုဒေါင်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော DIY Workspace အဖြစ်နှစ်ဆတိုးလာသည်နှင့်အမျှအရာများသည်မြန်ဆန်စွာရှုပ်ထွေးသွားနိုင်သည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ပစ္စည်းများအမြောက်အများကိုပြောင်းရွှေ့စရာမလိုဘဲသင်၏ကားဂိုဒေါင်ထဲမှအလုပ်နေရာပိုမိုရရှိရန်နည်းလမ်း ၁၀ ခုရှိသည်။ ၁။ မျက်နှာကျက်သိုလှောင်ခြင်း ...
Hot Tub ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း – သင်၏ Hot Tub ကိုမည်သို့ Winterize လုပ်ရမည်နည်း
သင့်ရဲ့ရေပူစိုပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိခြင်းသည်အခြေခံရေပူရေရှည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဆောင်းရာသီတွင်သင်၏ရေပူရေပူကိုအသုံးပြုရန်မရည်ရွယ်ပါက၎င်းကိုဆောင်းထားရမည်။ သို့မဟုတ်ပါကသင်၏ပိုက်လိုင်းနှင့်စုပ်စက်ကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေလိမ့်မည်။ ဤတွင်သင်အလုပ်လုပ်နေတာသွားပုံကိုပါပဲ။ အဆင့် ၁ – စတင်ခြင်း ဂျက်လေယာဉ်အားလုံးကိုဖွင့်ပြီးထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်များနှင့်ရေပေးဝေမှုကိုပိတ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်စတင်ပါ။ ဥယျာဉ်ရေပိုက်သို့မဟုတ်ရေမြှုပ်ထားသောစုပ်စက်ကို သုံး၍ စည်ပိုင်းမှရေကိုစစ်ထုတ်ပါ။ ရေကိုဤမျှကြီးမားသောရေနုတ်မြောင်းကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည့်လမ်းကြောင်းသို့ရေထုတ်ပါ။ ထို့နောက်ပါဝါကြိုးကိုဖြုတ်။ အပူပေးစက်ကိုဖြုတ်။ အပူပေးစက်ကိုဖြုတ်။ ပါဝါခလုတ်ကိုပိတ်ပါ။ ...
ဤဆောင်းပါးသည်လက်ရှိကုန်းပတ်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်သင်၏ A မှ Z သို့ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းကိုဖတ်ရှုခြင်းကသင့်အားအချိန်၊ ချွေး၊ မင်းပူစီနံုရော့ခ်ဟောင်းနွမ်းနေသည့်နေပူကျဲကျဲခန်း၌ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်များစွာပေးခဲ့သည့်သင်၏ကုန်းပတ်ဟောင်းသည်၎င်း၏အကောင်းဆုံးနေ့ရက်များကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဒီတော့စနေနေ့မနက်မှာမင်းနိုးလာပြီးကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ကုန်းပတ်ပေါ်ကနေထွက်လာကြပြီးကောင်းမွန်တဲ့အကြံဥာဏ်တွေယူကြပါ – ဒီကုန်းပတ်ကိုဒီနေ့လိုအပ်နေသောအသွင်အပြင်ကိုပေးဖို့ဒီနေ့ပဲ! ၁၇ စက္ကန့်အတွင်းမှာသင့်ရဲ့တိုင်းတာနိုင်တဲ့တိပ်ဟာသင့်ရဲ့ 16×20 ပေကုန်းပတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ ပုပ်စပ်နေသောကြမ်းခင်းအထပ်ပေါင်းများစွာကိုအစားထိုးပါ။ ထို့နောက်ညနေခင်းတွင်သင်သည်တစ်ဖက်တွင်ဘီယာတစ်လုံးနှင့်အခြားကုန်းပတ်သစ်၌ပျော်မွေ့ရန်အခြားတနေရာတွင်ကင်တံဆိပ်များရှိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ...
မည်မျှပင်ခိုင်ခံ့သည်ကိုသင်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၎င်းကို ပိုမို၍ ကြာရှည်ခံစေရန်နှင့် ထပ်မံ၍ ပံ့ပိုးမှုပေးရန်၎င်းကိုအားဖြည့်ပေးနိုင်သည်။ သံမဏိကွက်သည်ကွန်ကရစ်ကိုအားဖြည့်ရန်လူကြိုက်များသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကွန်ကရစ်ကိုအားဖြည့်ရန်အသုံးပြုသည့်သံမဏိကွက်သည်အခြားယွန်းထည်များကဲ့သို့သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သံမဏိကြိုးများသည်သံဘောင်နှင့်မတူဘဲအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းကိုအလွန်လူကြိုက်များစေသည်။ ၎င်းသည် rebar ၏စွမ်းအားကိုမပေးသော်လည်း၎င်းသည်အလွန်နီးကပ်သည်။ သံမဏိကွက်ကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသည်။ နံရံများ၊ ကော်လံများနှင့်လမ်းဘေးများ၏ခိုင်ခံ့မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုကြောင့် rebar ထက်အလုပ်လုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ကွန်ကရစ်ထဲတွင်ကွက်တပ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်ပေမယ့်မှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ထားရန်အချိန်နှင့်စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်ပါတယ်။ ...
ကားဂိုဒေါင် (၇) ကိုတည်ဆောက်ခြင်း
မိတ်ဆက် – ပစ္စည်းများ – ဖောင်ဒေးရှင်း – နံရံချခြင်း – နေရာချထားခြင်း၊ ဘောင်ချခြင်း – ခေါင်မိုးခြမ်း – ခြစ်ခြစ် – ၀ င်းဒိုး – ...
တုတ်ကွေး – နောက်ဆုံးမှလုပ်
၂၀ ရာစုအတွင်းမြောက်အမေရိကတွင်စတူးကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ပစ္စည်းအဖြစ်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ ခေတ်မီတုတ်ကွေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် ရေ၊ သဲနှင့်လိုင်းတို့ဖြင့်ရောနှောထားသောဘိလပ်မြေကိုပေါင်းစပ်သော်လည်းရှေးခေတ်ဂရိများနှင့်ရောမလူမျိုးများသည်လှပသောနံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံများအတွက်အခြေခံအဖြစ်ဂျipsum၊ ယနေ့ခေတ်တွင်အင်္ဂတေအားအနုပညာအတွက်အသုံးမပြုနိုင်သော်လည်း ၄ င်းသည်အိမ်တွင်းဘက်လိုက်ခြင်းအတွက်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည့်လက်တွေ့ကျအင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။ Stucco သည်ခက်ခဲသည်၊ ရေကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ လေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်လျှပ်ကာပေးခြင်းကိုပြုလုပ်သောကြောင့်၎င်းသည်သက်တမ်းတစ်လျှောက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။ အကောင်းဆုံးမှာ Stucco ကို DIY’er မှတပ်ဆင်နိုင်သည်။ သူတို့အိမ်အတွက်ကြာရှည်ခံသောအပြင်ဘက်နံရံကိုဖန်တီးရန်အချိန်အနည်းငယ်လိုသည်။ ...
တစ် ဦး ကအုတ်အိမ်သင်အပေါ်ဘဏ်လုပ်ငန်းနိုင်အလှတရားဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခြားပစ္စည်းတွေနဲ့မတူဘဲ၊ အုတ်ဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုကိုပေါင်းစပ်ပြီးအရေးကြီးတဲ့စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားလို့ပဲ။ အမြဲတမ်း၊ နွေးထွေးမှုနှင့်အရာဝတ္ထု – အုတ်သည်အိမ်တွင်နှစ်လိုဖွယ်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးများကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်သည်။ အဝေးမှပင်အုတ်သည်အိမ်၏သက်ရောက်မှုနှင့်ထူးခြားမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ပထမအကြည့်တွင် visitors ည့်သည်များသည်အိမ်ကို ပို၍ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိ၍ ပို၍ အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်ဟုထင်မြင်ကြလိမ့်မည်ဟုအုတ်ကအာမခံထားသည်။ ...
အဏ္ဏဝါအထပ်သားနှင့်အထပ်သားအဏ္ဏဝါတို့အကြားအဓိကကွာခြားချက်များမှာအမေရိကန်အထပ်သားအသင်း (APA) မှချမှတ်ထားသောအထပ်သားအဆင့်များအတွက်စံနှုန်းများမှဖြစ်သည်။ အထပ်သားအဆင့်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်အစိုးရမှသတ်မှတ်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း APA မှအုပ်ချုပ်သောစေတနာအလျောက်သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအသီးသီးတွင်နာမည်အမျိုးမျိုးရှိသော်လည်းစံသတ်မှတ်ချက်အများစုသည်အထပ်သား၏ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ တိကျသောစီမံကိန်းအတွက်မည်သည့်အရာသည်မည်သည့်အရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသိရန်အတွက်ဆောက်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောအရာ၏ကုန်ကျစရိတ်၊ အသုံးပြုမှု၊ အထပ်သားဒီဇိုင်း အထပ်သားကိုသစ်သားအလွှာများ (plies ဟုလည်းခေါ်သည်) ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ဆန်စပါးပုံစံများဖြင့်အတူတကွပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖန်တီးထားသည်။ အမြင့်နှင့်အောက်ခြေစပါးသည်အမြဲတမ်းအလျားလိုက်အလုပ်လုပ်သည်။ အပေါ်နှင့်အောက်အစွန်အဖျားများကို“ မျက်နှာများ” ဟုခေါ်ပြီးသစ်သားတွင်ချောမွေ့မှုနှင့်ချွတ်ယွင်းမှုအဆင့်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်သည်။ ...